Забур 113 CARS - Nnwom 113 AKCB
Monkamfo Awurade, mo a moyɛ nʼasomfo no,
mprempren ne daa nyinaa.
3Efi faako a owia pue kosi faako a ɛkɔtɔ,
nʼanuonyam tra ɔsorosoro.
5Hena na ɔte sɛ Awurade yɛn Nyankopɔn,
Ɔbaako no a odi hene wɔ ɔsorosoro,
hwɛ ɔsorosoro ne asase?
7Ɔma ahiafo so fi mfutuma mu
na ɔma onnibi so fi nso siw so;
wɔn nkurɔfo mmapɔmma mu.
9Ɔbɔ obonin atenase wɔ ne fi
sɛ ɔbeatan a nʼani gye.
AKCB : Nnwom 113